सफा आकाशमा जब एक्कासी विमान हल्लियो ! - Everest Dainik - News from Nepal
सफा आकाशमा जब एक्कासी विमान हल्लियो !
सफा आकाशमा एक्कासी विमान हल्लिँदा ३५ जना यात्रु घाइते भएका छन्। विमानमा २८४ जना यात्रु सवार थिए। क्यानाडाको भ्यान्कुभरबाट अस्ट्रेलियाको सिड्नीका लागि उडेको विमान सघन टर्बुलेसनमा परेको हो। टर्बुलेसनमा परेपछि विमानको आपतकालीन अवतरण गराइएको थियो।
होनोलुलुको विमानस्थलमा अवसतरण गर्ने बित्तिकै चिकित्सकहरूले यात्रुको स्वस्थ्य परीक्षण गरेका थिए। सो क्रममा सवार मध्ये ३५ यात्रु घाइते भएको भेटिएको थियो। विमानसेवाले जनाएअनुसार हवाइ टापुभन्दा दुई घण्टाको दूरी पर पुगेको विमानले सफा आकाशमै अचानक बेतोडको टर्बुलेन्स बेहोरेको हो।
याे पनि पढ्नुस पन्ध्र दिनअघि नै एयरलाइन्स भन्छन्- ‘दशैंको बुकिङ सकियो’
यात्रुहरूका लागि विमान कम्पनीले होनोलुलुमा होटलहरूको व्यवस्था गरिएको र यात्रुहरूलाई अस्ट्रेलिया लैजाने नयाँ उडानको व्यवस्था गरिरहेको विमान कम्पनीले जनाएको छ।
के हो टर्बुलेन्स ?
चलनचल्तीको भाषामा टर्बुलेन्स भनिने हावाको तापक्रम तथा अन्य कारणले उत्पन्न हुने अवस्थामा उडिरहेको विमान पर्दा निकै हल्लन्छ। क्लेयर एअर टर्बुलेन्स खासगरि सफा र शान्त आकाशमा अचानक हुन्छ जसको भेउ पाउन सकिँदैन।
याे पनि पढ्नुस महिला विमान चालकहरूले जोगाए ठुलो दुर्घटना
विभिन्न बेगमा बगिरहेको हावाको जम्काभेट हुँदा यस्तो स्थिति पैदा हुने बताइन्छ। यसलाई नांगो आँखाले वा परम्परागत रडारले पनि पत्ता लगाउने सक्दैन। विमानचालकहरूले सोही स्थानबाट गुज्रिँदा अन्य एयर ट्राफिक कन्ट्रोललाई दिएको जानकारीका आधारमा यस्तो अवस्था उत्पन्न भएको थाहा हुने बिबिसीले जनाएको छ। एजेन्सी
याे पनि पढ्नुस अवैधानिक बाटो हुँदै युएईमा पुगेर अलपत्र नौ महिला फर्काइए